Home Wararka Heshiiskii dhawaan laga gaaray colaadii Dhumay oo laga taageeray Puntland
Heshiiskii dhawaan laga gaaray colaadii Dhumay oo laga taageeray Puntland
Salaadiinta iyo odyaasha dhaqanka ee Puntland ayaa soo dhaweeyay heshiiskii dhawaan laga gaaray colaadii deegaanada Taleex iyo Dhumay. Colaadaan oo dad badan ku dhinteen ayaa waxa ku baxay salaadiinta deeganka Puntland iyo deegaanka Soomaalida ee Itoobiya.
Shirar lagu qabtay Magaalada Garowe ayaa looga hadlay sidii loo sii adkayn lahaa heshiiska dhawaan laga garay colaada. Dadka deegaanka ayaa ku eedeeyay dowlada Fedaraalka iyo xildhibaanada wakiilka ugu ah in ayan waqti galin ama ayan ka hadlin heshiiska. Odoyaasha deegaanka ayaa ugu baaqay dowlada Farmaajo in ay qayb ka qaatado taabagalinta qodobadii lagu heshiiyay.
Previous articleShaqaalaha iyo ciidanka BJFS oo ka hor yimid amarkii Mahad Cawad
Next articleMW Cabdiwali Gaas oo magacaabay Taliye Cusub
Al Shabab oo sheegtay inay burburiyeen dhismo ay lahayd shirkada Safaricom